Somali News 10.21.21
Published October 22, 2021 at 9:14 AM CDT
Wakaaladda Adeegyada Sharci -dejinta ee aan ka tirsanayn Iowa ayaa soo saartay soo -jeedinteedii labaad ee xuduudaha siyaasadeed ee cusub. Jamhuuriyiinta ku jira golaha guurtida ee gobolka ayaa diiday qorshaha koowaad ee wakaaladda.
Konton iyo lix xildhibaannada hadda jira ee gobolka ayaa laga yaabaa in la geliyo degmooyinka iyaga iyo saaxiibbadood. Qorshaha ugu horreeya ee dib -u -qaybin ayaa la isugu keenayaa in ka badan 60 xildhibaan oo degmooyinka ah.
Isbitaalada Nebraska ayaa dib u bilaabi kara qalliinnada mudnaanta hoose leh laga bilaabo berri. Guddoomiyaha Gobolka Pete Ricketts ayaa ku dhawaaqay maanta inuu soo afjarayo xannibaadihii ka ilaaliyay xarumaha inay ka buuxaan bukaannada inta lagu jiro cudurka faafa ee coronavirus.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan tallaalka dhalinyarada gobolka iyadoo maamulayaasha federaalku ay miisaamayaan badbaadada iyo wax ku oolnimada tallaalka COVID-19 ee carruurta da'doodu tahay 5 ilaa 11.
Aqalka Cad ayaa qorshayaal faahfaahsan shalay ka bixiyay tallaalka Pfizer in la siiyo dhallinyarada dugsiga hoose.
Matxafka tareenka ee magaalada Sioux wuxuu dib u hagaajinayaa sanduuq gurracan si uu ugu noqdo nuqul ka mid ah baabuurta lo'da ee Naasiyiintu u adeegsan jireen inay Yuhuudda Yurub ugu qaadaan xeryaha xoogga.
Fikraddu waxay ka soo baxday “Toddobaadka Dulqaadka” ee sannadlaha ah - kaas oo muddo 17 sano ah uu sannad walba keenay badbaadayaashii Holocaust magaalada Sioux si ay u booqdaan dugsiyada maxalliga ah si ay carruurta wax uga bartaan taariikhdooda.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa ku dartay 100 dhimasho oo dheeri ah COVID-19 taas oo wadarta guud ka dhigaysa 6,848 tan iyo bilowgii…